‘फोहोर उठेन चिन्ता नलुनु होस्, पैसा नै तिरेर फोहोर लिन आउछन्’ • Nepal's Trusted Digital Newspaper‘फोहोर उठेन चिन्ता नलुनु होस्, पैसा नै तिरेर फोहोर लिन आउछन्’ • Nepal's Trusted Digital Newspaper
‘फोहोर उठेन चिन्ता नलुनु होस्, पैसा नै तिरेर फोहोर लिन आउछन्’
पोखरा । घरमा नकुहीने फोहोर छ ? फोहोर कहाँ फाल्ने भएको छ ? फोहोरलाई तपाई मोहरमा बदल्न सक्नु हुनेछ । पोखरा महानगरपालिका १६ अर्मलामा ग्रीन भ्याली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले फोहोरलाई मोहर दिएर संकलन गरी रहेको छ । फोन गरेर आफ्नो घरमा भएको नकुहीने फोहोर दिन सकिनेछ ।
सहकारीको पोखरा १६ अर्मलामा स्थापना भएको फोहोर संकलन केन्द्रले लैजाने ग्रीन भ्याली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष प्रकास आचार्यले बताउनुभयाे । अहिले पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने ठाउँका स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोर उठाउन सकेको छैन । सडक छेउमा फोहोरका थुपो छन् ।
आचार्यले आँफुहरुले पैसा नै दिएर विगत एक वर्ष देखी फोहोर उठाउँदै आएको बताउनुभयाे तर कुहीने फोहोर भने नलिने उहाँको भनाई छ । उहाँले घरमा फोहोर संकलन भएपछि फोन गरेर बोलाएमा घरमा लिन जाने बताउनुभयाे । तर फोहोरको बर्गिकरण भने गरेर राख्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
अहिले प्लास्टिकका प्रति केजी ८ रुपैँया कागज प्रति केजी १० रुपैया, फलाम प्रति केजी ४० रुपैया, कपडा ४ प्रति केजी, तामा प्रति केजी ६ सय ५० रुपैँया र वियरको बोटल प्रति दुई वटा १ रुपैया तोकिएको बताउनुभयाे । अहिले १ सय ४३ जना शयेर सदस्य ५० लाखको पुजीँ रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयाे ।
अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभएकाे छ , ”नकुहिने फोहोर पैँसा दिएरै तपाइको घरबाटै उठाउछौँ । कृपया ९८५११९३५६२ मा सम्पर्क गर्नुहोस र फोहर लिन आउन समय लिनुहोस् । हामी सक्दो‌‌ उहि दिन नभए अर्कोदिन तपाई कँहा फोहर लिन आउने छौ ।”